News | विप्लव
News | Tag: विप्लव
काठमाडौँ । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले नेपाल बन्द सहित संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पार्टीका तेस्रो तहका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ पक्राउ परेको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
वैद्य–विप्लवसहित चार पार्टीबीच राज्यसत्ताकाविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, मोहन वैद्य, ऋषिराम कट्टेल र आहुतिका चार पार्टीले सत्तारुढ दलविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन भएका छन् । उनीहरुले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले यसका लागि रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेका छन् ।
ओलीको संसद विघटन कदमप्रति विप्लवले के भने ?
काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको संसद विघटन कदमप्रति प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
विप्लव समूहद्वारा ‘धौलागिरी’ बन्द
पोखरा । सरकारद्वारा प्रतिबन्धत नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आज गण्डकी अञ्चलका चार जिल्लाहरुमा बन्द आह्वा गरेको छ । विप्लव समूहले साविकको धौलागिरिका चार जिल्लाहरू पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा बन्दको आह्वान गरेको हो ।
विप्लव समूहले ‘व्यक्ति हत्याको राजनीति’ सुरु गरेपछि सरकार कसरी अघि बढ्ला ?
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’नेतृत्वको नेकपाले व्यक्ति हत्या गर्न थालेको छ । मोरङमा एक शिक्षकमाथि सुराकीको आरोप लगाउँदै बर्बरतापूर्ण ढंगले हत्या गरेपछि सरकार विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्नको लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने तयारीमा छ ।
बनेपाबाट विप्लव समूहका कार्यकर्ता पक्राउ
काठमाडौँ । बनेपाबाट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले आइतबार राति पौने ७ बजे बनेपा नगरपालिका– १० बसपार्क क्षेत्रबट उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रतिबन्धित विप्लव समूह ७ औं पार्टी पुनगर्ठन दिवस मनाउँदै
काठमाडौँ । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ७ औं पार्टी पुनगर्ठन दिवस मनाउँदै छ । एकीकृत जनक्रान्तिको झण्डालाई उच्च पारौं भन्दै विप्लव समूहले आज पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाइरहेको छ ।
पेस्तोलसहित विप्लव समूहका सैन्य लडाकु पक्राउ
मोरङ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वका सैन्य लडाकु पेस्तोलसहित पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले मोरङको उर्लाबारीबाट ३२ वर्षीय सैन्य लडाकुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–२ घर भई मोरङमा बसेर पार्टीको गतिविधीमा संलग्न रहँदै आएका पेम्बा साङ्गे शेर्पा रहेका छन् ।
काठमाडौँबाट विप्लव समूहका दुई जना नेता पक्राउ
काठमाडौँ । काठमाडौँबाट नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका दुई जना नेता पक्रा परेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २८ शहिद शुक्रमार्गबाट दुई नेता पक्राउ परेका हुन् ।